Taranaka - Noti saka | Noti saka
Ho hitanao eto ny iray lisitra feno amin'ny karazana saka rehetra ankehitriny. Fantaro ny fiaviany, ny toetra, ny fomba nahatongavany, ny fikarakarana ilaina ... ary betsaka kokoa momba ny biby fiompy tianao indrindra. Ho fanampin'izay, ho torolàlana hisafidianana izay mifanentana indrindra amin'ny filàna sy / na ny fomba amam-pianakaviana. Hampahafantarinay anao ny momba ireo karazana vaovao miseho ka tsy hisy afa-mandositra anao ny iray amin'izy ireo. Ankafizo.
Ilay saka bengali, volom-borona misy fijery bibidia sy fo goavambe
ny Monica sanchez hace Taona 1 .
Ny saka Bengal na saka bengali dia volo mahavariana. Mampatsiahy ny leoparda ny fisehony; na izany aza, tsy tokony ...
Ilay saka Highlander maloto
ny Monica sanchez hace 2 taona .
Ny Highlander dia baolina volom-borona tsara tarehy sy be fitiavana izay maharesy ny fianakaviana iray manontolo ao ...
Raha tia saka manana volo mainty ianao ary maniry hanana volom-borona koa ...
Ny saka manga rosiana dia, miaraka amin'ny persiana, karazana tena andriana. Ary tsy ny an'ny ...
Raha mitady liona an-trano mahafinaritra sy be fitiavana ianao izay lehibe kokoa noho ny eropeana iraisana ary toa ...
Ny saka Neva Masquerade dia zana-kazo miaraka amin'ny fijery malefaka sy mamy toy ny an'ny Siberian; avy…
Ny saka karazana Arabo Mau dia volom-borona tsara tarehy any Arabia izay, na dia mbola tsy ...
Na dia hafahafa aminao aza ilay anarana, azo antoka fa raha mpankafy saka ianao dia efa nahita na nandre izany ...
Ny saka saka Java dia biby mampino izay mampifanaraka tsy misy fahasahiranana miaina amin'ny fisaka ...
Raha iray amin'ireo mankafy mikofoka saka lava volo ianao, miaraka amin'ny LaPerm dia tsy ho leo ianao, ...
El Abyssinian Izy io dia iray amin'ireo karazam-saka taloha indrindra fantatra ary misy tsy azo antoka ny amin'ny tantarany.
Ny abyssinianina dia mitovy amin'ny saka ao amin'ny Egypty taloha aseho amin'ny sary hosodoko sy sary sokitra. Ny anarana "Abyssinia" dia tsy misy ifandraisany amin'ny niandohany, fa heverina fa ny Abyssinianina voalohany dia nohafarana avy Abyssinie.
Ny fiantsoana voalohany ny saka abyssinianina dia hita ao amin'ny boky anglisy nosoratan'i Gordon Staples navoaka tamin'ny 1874 niaraka tamina lithograph miloko saka abyssinianina iray izay napetraka tany UK tamin'ny faran'ny ady.
Na izany aza, tsy misy firaketana an-tsoratra fa ny saka dia nafarana avy any United Kingdom ary misy ny sasany amin'izao fotoana izao manana ny heviny fa ny Abyssinian dia noforonina tamin'ny alàlan'ny lakroa misy firazanana samihafa ao amin'ny Fanjakana Mitambatra.
Saingy misy ny fanadihadiana nataon'ny mpikaroka génétiolojia izay mampiseho fa ny morontsiraky ny Ranomasimbe Indianina sy ny faritra atsimon'i Azia atsimo no faritra niavian'ny saka Abyssinianina. Ny saka Abyssinianina dia nafarana tany Amerika Avaratra avy tany Angletera tamin'ny voalohany 1900 ary amin'ny faran'ny taona 1930 Nanafatra nankany Amerika avy any UK izy ireo.
Ny Abyssinianina dia mahay, mailo ary mavitrika, dia saka tia sahirana. Ilay Abyssinianina dia tia miaraka amin'ny olona, ​​saingy mahaleo tena ary hiezaka hanjakazaka ao an-trano.
Kanto izy ary manana vatana hozatra.
Manana maso lehibe sy miendrika amandy izy, nefa kely kokoa noho ny mahazatra ny sofina.
Savannah saka, ny lehibe indrindra amin'ny rehetra
Ilay saka vavam-boasary
Ilay saka fotsy